Wozniak anotsanangura mutsauko uripo pakati peMabasa neGates | IPhone nhau
Pane asingazive here Steve Wozniak? Kana paine chero clueless, "IWoz" ndiye akabatanidza Apple uye mugadziri wekomputa yekutanga yeapuro yakarumwa kumashure muna 1976, iyo Apple I. Iyo komputa yainyatso kuve huru mamaboard. Dai Steve Jobs anga asina kuona basa raWozniak, angadai asina kumbove nechigadzirwa chekutengesa uye Apple yaisazovapo.
Steve Wozniak munguva pfupi yapfuura akaonekwa paNational Geographic show maakatsanangura zvaanofunga kuti zvaive. musiyano mukuru pakati paSteve Jobs neBill magedhi, vese shamwari nevakwikwidzi kubva apo Apple Computer neMicrosoft zvakatanga kubuda zvichiteerana.
Wozniak akadaro muchikamu cheAmerican Genius:
Steve Jobs Aive nemuono wenguva yemberi wenguva yemberi, angangoita nekamwe kesainzi kekufungidzira, "apa ndipo panogona kuve hupenyu", asi Bill Gates aive nehunyanzvi hwekuuraya kuvaka izvo zvaidikanwa panguva iyoyo, kuvaka kambani chinguva, ita purofiti izvozvi, munguva pfupi. Ini ndinofunga ndiwo musiyano mukuru pakati pavo..
iWoz zvakare inoti kunyange hazvo Mabasa angave anonyanya kukosha pakuzvarwa kwemakomputa ega, Gates ndiye ega ainzwisisa maitiro ekuita mari:
Iwe unonyatsoda kuve nechiono icho Steve Jobs aive nacho, asi chiratidzo hachina kwachinosvika kana iwe ukaedza kusvetukira mukati nekuvaka zvigadzirwa zvisati zvave zvinobatsira pane izvo zvavanoita, iyo payback iripo. Yaive panguva yeMacintosh nguva iyo musika wepasi rose wakakura kagumi uye Apple haina kukura nayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Wozniak anotsanangura mutsauko mukuru pakati paSteve Jobs naBill Gates
Typo keyboard inofa zvechokwadi